.ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးတွေ မြန်မာပြည်ကို ရောက်ပြီ (ယခုအသုတ်သည် အိန္ဒိယအစိုးရက အခမဲ့ပေးသော ဆေးများဖြစ်). – Askstyle
.ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးတွေ မြန်မာပြည်ကို ရောက်ပြီ (ယခုအသုတ်သည် အိန္ဒိယအစိုးရက အခမဲ့ပေးသော ဆေးများဖြစ်).
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးတွေ မြန်မာပြည်ကို ရောက်ပြီ (ယခုအသုတ်သည် အိန္ဒိယအစိုးရက အခမဲ့ပေးသော ဆေးများဖြစ်)
အိန္ဒိယက ပို့ဆောင်လိုက်တဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး (၁) သန်းခွဲ ဟာ အခုဆို မြန်မာနိုင်ငံကို ပထမအသုတ် အဖြစ် ဒီကနေ့မွန်းလွဲ(၂)နာရီကျော်မှာ ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ဒီ (၁) သန်းခွဲဟာ ဆိုရင် တစ်ဦးကို (၂)ကြိမ်နှုန်း နဲ့ လူဦးရေ (၇) သိန်းခွဲစာ ထိုး နှံနိုင်မှာပါ။
အခုရောက်လာတဲ့ဆေးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကဝယ်တဲ့ဆေးမဟုတ်ဘဲ အိန္ဒိယအစိုးရက အခမဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ ဆေးတွေဖြစ်တယ်လို့လည်း အိန္ဒိယသံရုံးကနေသိရပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ ကာကွယ်ဆေးများ ရောက်ရှိလာမည့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ သတင်းမီဒီယာများက ကြိုဆိုစောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိနေကြပါတယ်။
အဆိုပါကာကွယ်ဆေး ၁ သန်းခွဲမှာ ပြည်သူ ၇ သိန်းခွဲ ထိုးနှံနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လူတဦးလျှင် ၂ ကြိမ် ထိုးနှံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပထမဦးစားပေးအဖြစ် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများကို ဦးစားပေးထိုးနှံမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကိုဗစ် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပြည်သူများသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသော ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးများ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်း စတင်ထိုးနှံပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ကိုဗစ် ဆိုင်ရာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှာ ပြောကြားထားပါတယ်။
ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆးေတြ ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္ၿပီ (ယခုအသုတ္သည္ အိႏၵိယအစိုးရက အခမဲ့ေပးေသာ ေဆးမ်ားျဖစ္)
အိႏၵိယက ပို႔ေဆာင္လိုက္တဲ့ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး (၁) သန္းခြဲ ဟာ အခုဆို ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပထမအသုတ္ အျဖစ္ ဒီကေန႔မြန္းလြဲ(၂)နာရီေက်ာ္မွာ ေရာက္ရွိလာပါၿပီ။ ဒီ (၁) သန္းခြဲဟာ ဆိုရင္ တစ္ဦးကို (၂)ႀကိမ္ႏႈန္း နဲ႔ လူဦးေရ (၇) သိန္းခြဲစာ ထိုး ႏွံႏိုင္မွာပါ။
အခုေရာက္လာတဲ့ေဆးကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကဝယ္တဲ့ေဆးမဟုတ္ဘဲ အိႏၵိယအစိုးရက အခမဲ့လက္ေဆာင္ေပးတဲ့ ေဆးေတြျဖစ္တယ္လို႔လည္း အိႏၵိယသံ႐ုံးကေနသိရပါတယ္။
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ေရာက္ရွိလာမည့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ႀကိဳဆိုေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိေနၾကပါတယ္။
အဆိုပါကာကြယ္ေဆး ၁ သန္းခြဲမွာ ျပည္သူ ၇ သိန္းခြဲ ထိုးႏွံႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူတဦးလွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ထိုးႏွံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဦးစားေပးထိုးႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိုဗစ္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပေသာ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ မိန႔္ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားပါတယ္။
ကာကြယ္ေဆးမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း စတင္ထိုးႏွံေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုဗစ္ ဆိုင္ရာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးေဒါက္တာခင္ခင္ႀကီးက ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းမွာ ေျပာၾကားထားပါတယ္။